မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကိုရီးယားစာ စားကြပါအုံး...
Posted by mabaydar at 10:26 PM
Welcome back. :D အစားချည်းတော့ မမြင်ချင်ဘူး။ မစားရပဲ မြင်တာနဲ့ ဗိုက်ဆာတယ်။ ရှုခင်းပုံကလေး ဘာလေး လုပ်ပါဦး။ ရှေ့မှာ မင်းသမီးပုံ ပါရင်လည်း ကိစ္စ မရှိဘူး။
5/16/2009 12:12 AM
လာမယ်လေကွယ်... ဖြည်းဖြည်းပေါ့.. နောက်မှ တော်ပါပြီ မပြောနဲ့... ဟား.. ဟား..
5/16/2009 12:27 AM
ရှန်ဂရီလာ ကပုံကလေးတွေလည်းလုပ်ပါဦါ် မီးသမီးအခန်းများပါစေ။
5/16/2009 12:40 AM
အဟား သရေ လာကျသွားတယ် ရှလွတ်...
5/16/2009 2:27 AM
စားချင်စရာလေးတွေ.... အပေါ်ဆုံးက ဝက်သားပြားကို အချဉ်နဲ့ တို့စားလိုက်လို့ကတော့... ရှလွတ်
အင်တာနက် ၂ ပတ်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ ဆိုးတာပေါ့...
ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်မှာစိုးရင် scanner ထည့်ထားပေါ့..
စာဖတ်ပြီးတော့ ပုစွတ်ထုပ်ကြီး စားသွားပါတယ်...
5/17/2009 12:17 AM
ကိုလူထွေး သေချာမဖတ်ဖူးထင်တယ်... ၂ပတ်ပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူး.. မသွားခင် ၂ပတ်ထဲက အပြီးတိုင်ပိတ်လိုက်တာပါ...
ဆိုဂျူး တစ်ခွက်လောက် ကစ်လိုက်တာ...
“ဖလူး ဖလူး..” မူးသွားတာပဲ တကယ့် အရက်ပြန် သောက်မိသလို.. ;)
ဝါးတီးတွေက ကောင်းမှကောင်း ဖတ်ရင်း ကြည့်ရင်း “ဂလု ဂလု” နဲ့ မျိုမျိုချနေရတယ်.. :P
လုပ်ပါဦး ရှုခင်းလေးတွေ.. ကိုးရီးယားမလေးတွေ..
အဟဲ.. မင်းသားဆိုတာ ဘူလေးကို ပြောတာလဲဟင်... မဗေဒါနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ အိုပါးလေးကိုပြောတာလား.. သူလေးကလာမယ်.. ဗွီဒီယိုထဲမှာ မတော်တဆ (တခါတလေလဲ တမင်တကာ) ပါလာတဲ့ပုံတွေကို စုပြီး သီချင်းနဲ့ အက်ဒစ်လုပ်မလို့... ဒီတော့ ကြာအုံးမယ်...
အခုက မင်းသမီးအခန်းနဲ့ အစားအသောက်တွေပဲလာနေသေးတယ်..
မင်းသား oppa ကို ပြောတာပါ.. အပေါ်မှာလဲ ညွှန်းထားတော့ ကြည့်ချင်လို့..
မဗေဒါ ကြည့်ရတာ ဒီခရီးသွားမှ ပိုဝလာသလိုပဲ :P
5/21/2009 1:19 PM
အစားအသောက်တွေချည်းပဲ တင်နေတော့ ခက်တာပဲ။ ခရီးသွားပို့စ်လား အပြီးစားစို့လား?
ဗေဒါပင်ပုံက ပါသေးတယ်။း)
ဟုတ်ကဲ့ကိုတောင်ငူရေ... ဒါက ပြန်ရောက်ပြီးတော့ ခရီးသွားပို့မရေးနိုင်သေးလို့ ရိုက်လာသမျှ အစားအသောက်လေးတွေကို မျှဝေပြီး အင်ထရိုဝင်လိုက်တာ.. အစ်ကို့ ကျိုက်ထီးရိုးက ယုန်သားကင်လို့ပေါ့...
5/29/2009 9:23 PM